Wararka Dibadda – Page 2 – Shabakadda Amiirnuur
Kudhawaad 20 askari Oo lagu dilay weerar ka dhacay dalka Afqaanistaan.
Ciidamada Imaarada islaamiga ee Afqaanistaan ayaa weerar qorsheysan oo xoog leh waxay ku qaadeen difaac ay ku sugnaayeen ciidamo katirsan kuwa xukuumadda Kaabul. Weerarka waxa uu ka dhacay deegaan hoostaga gobolka Kabiisa, waxaana ka dhashey waxyeello kala duwdan oo gaartay askarta xukuumadda Kaabul. Inta haatan la xaqiijiyay waxaa weerarkaas ku […]
Golaha Xuquuqda Aadanaha ee Qaramada Midoobay ayaa ku dhawaaqay, Isniinta shalay, inuu qabanayo wadahadalo deg deg ah maalinta Arbacada oo berri ah, isagoo u kuur geli doona eedeymaha “midab kala sooca nidaamsan, naxariis darada booliiska iyo adeegsiga rabshadaha iyo kacdoonada Mareykanka. Mareykanku xubin kama ahan 47-da gole, oo xaruntoodu tahay […]
Hoos U Dhac Weyn oo Ku Yimid Dhaqaalaha Ingiriiska.
Dalka Ingiriiska oo sida uu sheegto kamid ah wadamada ugu dhaqaalaha badan dowladaha ka jira caalamka ayaa haatan ka cabanaya hoos u dhac dhaqaale oo soo food saaray bilihii lasoo dhaafay. Arrintan ayaa waxaa loo sababeeyay cudurka Carona iyo saameynta uu ku yeeshay wadankaas gaar ahaan bishii April oo uu […]
Corona Dartii, iibinta gawaarida Toyota oo hoos u dhacay 45%.
Shirkadda sameysa gawaarida Jaban ee Toyota. waxay shaacisay maanta in iibkeeda caalamiga ah uu hoos u dhacay 45.3% (afartan iyo shan dhibic sadax boqolkiiba) sababtana waxay ku sheegtay cudurka Carona. Dhanka kale, guud ahaan soosaarka kooxda ayaa hoos ugu dhacay 51.5% (konton iyo kow dhibic shan boqolkiiba) bilihii lasoo dhaafay. […]
Silvia Romano oo ah haweeney 25 jir ah oo u dhalatay dalka Talyaaniga, laguna heystay Soomaaliya ayaa dib u heshey xurriyadeeda, iyadoo dib ugu laabatay dalkeeda Talyaaniga. Romano, waxaa sanadkii 2018-ka rag hubeysan ay kasoo af duubteen dalka Kenya, halkaas oo ay ka shaqeyneysay, iyadoona sanadihi ay xirneyd lagu hayay […]
Dhageystayaal Intaa ayaan kusoo gabagabeeneynaa qeybta 21-aad ee barnaamijka taariikhda (Al-xuruubusaliibiyah) tan iyo qeybta xigta wsc.
Wararka ka imaanaya dalka Maali ee dhaca galbeedka qaaradda Africa ayaa ku waramaya in ciidamada Jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ay fuliyeen silsilado weeraro xoogan oo ay ku beegsadeen ciidamada Shisheeyaha Faransiiska iyo kuwa xukuumadda Maali. Weerar ka dhacay qeybo kamid ah gobolka Kidhaal ee wuqooyiga dalka Maali ayaa waxaa […]
Dhageyso Qeybta 11-Aad Barnaamijka (Al-Xuruubu Saliibiyah)
Toogasho Dad badan lagu dilay Oo ka dhacday Canada.
Dalka Canada waxaa ka dhacday toogasho khasaare badan dhalisay oo lala beegsaday muwaadiniin iyo ciidamo katirsan booliiska Canada. Weerarka toogashada ah waxa uu ka dhacay deegaan baadiyaha dhaca oo lagu magacaabo Nova Skotiya, waxaana halkaas lagu dilay ugu yaraan 16 ruux oo midi uu yahay sarkaal katirsan Booliiska Canada. Sida […]
Aaal-Sucuud Oo sheegay in Salaadda Taraawiixda Lagu tukan doonin Masaajidda.
Muftiga guud ee maamulka Aala-Sucuud Sheekh Cabdil Caziiz Aala Sheykh ayaa war uu soo saaray wuxuu ku sheegay in salaadda Taraawiixda ee la tukto bisha barakeysan ee Ramadaan aan lagu tukan doonin sanadkan masaajiida ku yaala dhulka Xarameynka. Wuxuu arinkaas ku sababeeyay cudurka Coronavirus ee caalamka ka jira, isagoona sheegay […]
Itoobiya Oo Xaalad Deg deg ah lagu soo rogay Corona Awgii.
Dowladda Itoobiya ayaa si rasmi ah waxay xaalad deg deg ah ugu soo rogtay guud ahaan wadankaas, sababo ku aadan cudurka Coronavirus ee kusii faafaya caalamka. War kasoo baxay xafiiska Ra’iisul wasaaraha Itoobiya Abey Axmed ayaa lagu sheegay in dalka Itoobiya la geliyay xaalad deg deg ah, islamarkaana loo cuskaday […]